Iintlanzi ezi-6 zamanzi abandayo kwi-aquarium yakho, ngaba uyazi zonke? | Ngeentlanzi
Iintlanzi zamanzi abandayo
UMonica Sanchez | | Amanzi abandayo e-aquarium
Ngaba ucinga ukuba nezilwanyana kodwa awunalo ixesha elininzi lokuzinyamekela? Ke ndicebisa ukuba uthenge i-aquarium kunye neentlanzi zamanzi abandayo. Oku, ngokungafaniyo nabo bahlala kwimozulu yetropiki, abayidingi i-thermostat; amanzi acocekile kwaye, ewe, banikwa ukutya amatyeli aliqela ngosuku.
Nangona zininzi iintlobo ezikhoyo, inyani kukuba zanele ukuseta i-aquarium enomdla kakhulu. Yazi i Ezona mpawu ziphambili zentlanzi yamanzi abandayo kunye nokhathalelo olufunekayo ukuhlala iminyaka eliqela.
1 Zinjani iintlanzi zamanzi abandayo?
2 Lufuna oluphi ukhathalelo?
3 Iindidi zentlanzi yamanzi abandayo
3.1 Ibhari epinki
3.3 IKoyo carp
3.4 Marble coridora
3.6 I-perch yelanga
Zinjani iintlanzi zamanzi abandayo?
Iintlanzi zamanzi abandayo zezi Bahlala ezilwandle apho iqondo lobushushu eliphakathi liphakathi kwe-16 kunye ne-24ºC.. Imizimba yabo irhangqiwe, inamaphiko enye okanye aphindwe kabini, anokuba mfutshane okanye angaphantsi kancinci ngokuxhomekeke kuhlobo lweentlanzi.
Ukuba sithetha ngokubona, akusoloko kulungile, kodwa ayisiyongxaki leyo kubo, kuba enkosi ngamakhala abo kunye neendevu ezisemilonyeni yabo banokuzikhokela babone ubukho besinye isilwanyana oko kusondela.
Ngokubanzi, zizilwanyana ezizolileyo ezidada kancinci. Ngesi sizathu, Banokukunceda kakhulu ukuba uphumle.
Lufuna oluphi ukhathalelo?
Ukuzigcina usempilweni iintlanzi zamanzi abandayo, kubaluleke kakhulu ukuba sibanikeze ngononophelo olusisiseko, oluthi:
Ukutya: Kubalulekile ukubanika ukutya okusemgangathweni, esiza kukufumana kwiivenkile zemveliso yezilwanyana. Ukutya kuya kufuneka unike ngokobungakanani bayo, ukuze ezincinci okanye eziphakathi zinikwe iigranu, kunye neepellets ezinkulu. Ukuhamba rhoqo kuya kuba kabini ukuya kathathu ngemini, kwaye kuya kusoloko isixa abanokutya ngemizuzwana.
Isondlo: Kucetyiswa kakhulu ukuba zigcinwe kumadama eglasi okanye kwi-aquariums, enamanzi ane-pH ephakathi kwe-6,5 kunye ne-7,5. Indawo ezifumaneka kuyo kufuneka zicocwe kakuhle phakathi kwesinye okanye ezibini ngeveki, zibeka iintlanzi kwisitya okanye isitya ngamanzi de ikhaya labo lishiywe lingafakwanga.
Iindidi zentlanzi yamanzi abandayo
Ngoku ukuba uyazi ukuba banjani kwaye bazinakekela njani, lixesha lokuba ufumanise ukuba yintoni iintlobo zeentlanzi zamanzi abandayo zezona zixhaphakileyo kwii-aquariums.
Le yenye yeentlanzi esihlala sizifumana kwiivenkile zezilwanyana. Igama layo lenzululwazi ngu Puntius conchonius, kwaye ungowokuzalwa eAfghanistan, Pakistan, India, Nepal, Bangladesh naseBurma. Yi ukumelana kakhulu, ukuxhasa amaqondo obushushu phakathi kwe-17 ukuya kuma-25 degrees Celsius. Nje ukuba bafikelele ebudaleni, zi-14cm ubude.
IGoldfish, enegama lenzululwazi ICarassius auratusNangona yaziwa kakhulu njenge-carpín okanye intlanzi ebomvu, yeyona ndawo idumileyo. Inemvelaphi yaseChina, kwaye ngenxa yobungakanani bayo-malunga ne-15cm ebudaleni- kufanelekile kakhulu ukuba ube kwii-aquariums ngobukhulu obahlukeneyo. Zininzi iindidi, ezinje ngeBlue Bubble okanye iNtloko yeNgonyama, kodwa ngayo nayiphi na kuzo unokuyonwabela le nto uyithandayo ngaphandle kokukhathazeka.
Koi Carp, okanye ICyprinus carpio Ngolwimi lwenzululwazi, yenye yeentlanzi ezithandwa kakhulu. Ikwayinzalelwane yase China, nangona behlala kuzo zonke iilwandle, ngaphandle kwezobandayo ezipalini. Sisalamane seCARP eqhelekileyo, kwaye kufuneka uyazi loo nto zingakhula ziye kuma kwi-70cm ukuba i-aquarium inkulu.
Imabhile ye-coridora okanye i-coridora pepper, ngokwenzululwazi eyaziwa ngokuba yi-Corydoras paleatus, yenye yezona zinto zicetyiswayo kubaqalayo, ukusukela inyamezelana neempawu ezahlukeneyo zamanzi. Yinzalelwane yengingqi yetropiki yoMzantsi Merika, ngakumbi ihlala kwimilambo yeArgentina, iBolivia, iBrazil, iParaguay kunye neUruguay. Ikhula nge-14cm.
Le ntlanzi, yohlobo lweGambusia, iyanyangeka kakhulu, kangangokuba inokuphila emanzini ashushu nabandayo. Zazalelwa kwimilambo uninzi lwehlabathi, kubandakanya iYurophu, iAsia neAfrika. Zingagcinwa kwiindawo ezinamanzi ezincinci okanye eziphakathi, kuba zikhula ziye kwi-14cm, kodwa kufuneka sazi ukuba le ntlanzi iyazidla, kwaye ingatya ifry zezinye iintlobo zeentlanzi.
Le yenye yeentlanzi ezimeleyo ngemibala yayo emihle, kodwa kunye nokulungelelaniswa kwayo, ixhasa ukusuka kwi4ºC ukuya kwi22ºC. Igama layo lenzululwazi ngu I-Lepomis gibbosus, kwaye imvelaphi yayo isuka eMntla Melika, nangona namhlanje, enkosi ikakhulu kuncedo lwabantu, ikwafumaneka naseAfrika naseYurophu. Sisilwanyana esidla inyama, ke Akucetyiswa ukuyibeka kunye nezinye iintlobo zeentlanzi, kwaye akufuneki ibuyiselwe kwimeko yayo yasendle. Iinkunzi ezindala zingakhula ziye kuma kwi-20cm ubuninzi.
Ukuza kuthi ga ngoku okhethekileyo kwiintlanzi zamanzi abandayo. Siyathemba ukuba sikuncede ukuba ukhethe abaqeshi bakho abatsha. Ngaba uyazi ngakumbi iintlanzi ezincinci zamanzi abandayo?
Yonwabele inkampani yakho
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Amanzi akwariyam akwariyam » Amanzi abandayo e-aquarium » Iintlanzi zamanzi abandayo
Uninzi lweentlanzi ezilapha alunakuphila emanzini abandayo, kwaye i-goldfish ayilulohlobo lweentlanzi kodwa luhlobo. Oko kukuthi, ndicebisa ukuba umntu obhale lo msebenzi waziswe ngcono ngaphambili njengoko kunokukhokelela ekubeni abantu abaninzi benze impazamo. Ukubulisa.
UGuido Obregón C. sitsho
Enkosi Nkosazana Monica. Inomdla kakhulu kwaye iyanceda umboniso wakho.
Phendula kuGuido Obregón C.
Ilanga le-perch lihle, kodwa andiyicebisi kwi-aquarium. Bodwa baya kutya phantse nantoni na ezandleni zakho, kumava andikucebisi
Izinto eziphilayo zaselwandle zePelagic kunye ne-benthic
Ingahamba ixesha elingakanani ngaphandle kokutya